Ciidamada Gorgor oo Heegan la galiyay iyo sababta ka dambeysa | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada Gorgor oo Heegan la galiyay iyo sababta ka dambeysa
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandoota Gorgor ayaa heegan buuxan la galiyay, iyadoo aan la ogeyn waxa ku soo beegay xilligan heeganka dheeriga ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha Ciidanka dhulka Xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa gelinkii dambe ee shalay kormeer ku tegay xarunta taliska guutada Gor-gor ee xero damaanyo ee ku taal degmada Hodan.
Taliye Maxamed Tahliil ayaa Saraakiisha Ciidamada Gor-gor ee xoogga dalka Soomaaliya kula hadlay goobtaasi, waxa uuna siiyay in xaaladda dalka uu ku jiro ay tahay mid mar waliba loo baahan yahay askarigu inuu heegan buuxa ku jiro, waxa uu si gaara utilmaamay xilligan in feejignaan dheeri ah loo baahan yahay!
Taliye Maxamed Tahliil oo lagu tilmaamo shakhsiyaadka sida tooska ah uga amar qaata madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa sarkaalkii ugu sareeyay ee bixiyay amrkii lagu weeraray 19-kii Febraayo2021 Hotel Mai'da oo ay dagganaayeen laba madaxweyne, waxaana xusid mudan in weerarkaas uu diiday fulintiisa Taliyaha ciidamada Waran ee hoos taga Nabad Sugidda Fahad Yaasiin.
Booqashadiisa shalay ee uu ku tagay xerada Damaanyo Taliye Maxamed Tahliil iyo Heeganka dheeriga ah ee la galiyay ciidanka Gorgor ayaa waxay ku soo aadday xilli shalay uu fashilmay kulan muddo kordhin loogu sameynayay Madaxweyne Farmaajo iyo Golaha Shacabka kaa oo ka dhici lahaa xarunta Baarlamanka ee KMG ee Villa Hargeysa.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in ciidamada Gorgor loo daabuli doono afaafka hore ee madaxtooyada halkaasoo lagu celin doono fadhiga ugu horreeya ee baarlamanka 15 xildhibaan oo kamida mudanayaasha Baarlamanka JFS, sidoo kale waxay qeyb ka qaadan doonaan is hor-taag dambe haddii uu ka dhaco gudaha xarunta Baarlamanka ee uu shirka ka socdo, iyadoo si qasab ah loo adeegsan doono awood ciidan si muddo kordhin loogu sameeyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo.
Ciidamada Gorgor ee lagu soo tababaray waddanka Turkiga, islamarkaana loo diyaariyay in ay la dagaallamaan kooxaha nabad diidka ah ee Al-Shabaab ayaa loo weeciyay meel kale, waxa ayna noqdeen ciidamada ugu horreeya ee gaashaanka u noqday inuu Farmaajo awood kusii joogo talada dalka, haddana uu udan-leeyahay inuu xalaaleysto oo uu sameysto muddo kordhin sharciga baal marsan!